रामकुमार परियार – Page 10 – Ram Kumar Pariyar
राज्यले बिर्सेको एक देश भक्त-प्रथम सहिद लखन थापा(मगर)
तपाईंको ल्यापटपमा पानी पस्यो ? यसो गर्नुहोस ।
ल्यापटपका प्रयोगकर्ताले ल्यापटप चलाइरहँदा कहिलेकाहि पानी पर्न सक्दछ । ल्यापटपमा पानी पर्ने वित्तिकै यी बाह्र उपाय अपनाएमा ल्यापटपलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । १. ल्यापटपको पावर तुरुन्त बन्द गर्नुहोस्। साथै एडप्टर र ब्याट्रि दुबै निकालिदिनुहोस्, जसले गर्दा ल्यापटप शर्ट हुने खतरा कम हुन्छ। ...
२०७२ असार १३
ब्लग भन्नाले त्यस्ता वेबसाइट बुझिन्छ , जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना लेख तथा विचारहरू एक अनलाइन डायरीका रूपमा प्रकाशित गर्दछन् । आफूलाई लागेको कुरा लेखेर इन्टरनेटमा प्रकाशित गर्नका लागि ब्लग अहिले विश्वमै चर्चित बन्दै गएको छ । यसैको एउटा उदाहरण यो पनि हो , जहाँ तपाईं...
२०७२ असार १२
भुलवश सेण्ड भएको ईमेल कसरी रद्द गर्ने ? गुगलको नयाँ फिचर
सूचना आदान–प्रदानका लागि कुनै जमानामा कटुवाल प्रथा, हाते चिठ्ठी, गाउँघरमा, परेवाको प्रयोग, आकाशवाणी, हुँदै अहिले इमेलको प्रयोग आधुनिक जीवनको हिस्सा नै बनेको छ । तर, यसको प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ हैरानीमा पनि परिन्छ । झुक्किएर डकुमेन्ट गलत आइडीमा सेन्ड भइदिन्छ या आइडी सही हुँदाहुँदै पनि...
टाईट पाईन्ट लगाउँदा परिएला नि अप्ठ्यारोमा
२४ जुन , एजेन्सी । निकै कसिलो जिन्स लगाउने शोख एक युवतीका लागि यति भारी सावित भयो की उनले लगातार ४ दिनसम्म अस्पतालको बास बस्नुपर्यो । अस्ट्रेलियाको एडिलेडकी ३५ वर्षीयाले यति कसिलो पाइन्ट लगाएकी थिइन् की बढि कसिएपछि रक्तनली समेत थुनिएर उनका खुट्टाहरुमा रक्तप्रवाह...
२०७२ जेष्ठ २९
फोल्डर भित्रको एउटा तस्वीर
समुदायमा काम गर्दा ताकाको एउटा चिनो !!!